महरामाथि प्रहरीका आरोपै आरोप, अनुसन्धानबाट भेटायो यस्तासम्म कुरा — Sanchar Kendra
१भारतमा बढिरहेको कोरोना महामारीबारे बोल्यो डब्ल्युएचओ
२कोरोना सक्रमणका कारण कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पत्नीको निधन
३फेरि गयो ६ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
४कोरोना संक्रमणबाट बच्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हरेक बिहान गर्नुहोस यस्ता व्यायामहरू
५अक्सिजन सिलिण्डर लिन ओमान उड्यो नेपाल एयरलाइन्सको विमान
६अबेर राति सकिएको ओली-नेपाल वार्तामा के भयो सहमति ? भिम रावलले खोले यस्तो रहस्य
७कस्तो रहला आज देशभरको मौसम
८कोरोना संक्रमणबाट सयौंले ज्यान गुमाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो लज्जास्पद अभिव्यक्ति
९ओली-नेपाल समूहबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी, काे-को छन् सहभागी ? यी हुन् छलफलका तीन एजेण्डा
१०ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु, अरु को को छन् सहभागी ?
११कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु
१२ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यसअघि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराउँदै आएको प्रहरीले बिहीबार अनुसन्धानको पूरा प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो । प्रहरीको प्रतिवेदन पाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार नै महराविरुद्ध कडा सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
प्रहरीले महराका विरुद्ध तयार पारेको ३६ पृष्ठ लामो आरोप पत्रमा धेरै तथ्यहरु प्रस्तुत गरेको छ । प्रहरीले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेर आफ्नो अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाए पनि उनीमाथि बिहीबार थुनछेकको बहस र बयान भने भएन । यसअघि महराको मुद्दाको थुनछेक बहस बिहीबार हुने भनिएको थियो । बिहीबार बहस र बयान हुन नसकेपछि महरालाई अदालतमा पेश गराएर प्रहरीले हिरासतमै फर्काएको छ । बिहीबार हुने बहसपछि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने अदालतले निर्णय गर्ने बताइएको थियो ।
प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महरामाथि कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । २० दिन लामो अनुसन्धानबाट महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई ज’ब’र’ज’स्ती क’रणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको आरोपपत्रमा महरा असोज १२ गते साँझपख ५ जना सुरक्षाकर्मीसहित संसद सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीको कोठामा गएको उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ जाँदा महरा आफैले ‘रक्सीको बोत्तल’ बोकेर पुगेको पनि प्रहरीको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका महराले कुनै हेक्का नराखी राज्य र आमनागरिक समेतका हकमा पर्ने असर समेतलाई ख्याल नगरी सोको संवेदनशीलताप्रति वेवास्ता गरी, केही सुरक्षाकर्मी मात्र लिई साँझ मादक पदार्थ सेवन गरी, साथमा रक्सी रहेको बोत्तल आफ्नो साथमा लिई, पीडित एक्लै रहेको निजको डेरामा गई निजलाई ज’बर’ज’स्ती मादक पदार्थ सेवन गर्न कर लगाई गराई अनुचित प्रभावमा पारी पीडितलाई ज’ब’रज’स्तीकरणी गर्न खोजेको ।’
उक्त दिन महरा रोशनीको तीनकुनेस्थित सुविधानगर कोठामा पुग्दा उनकै साथमा नेपाल प्रहरीका दुई जना असई, एक जना नेपाली सेनाका जमदार, एक प्रहरी हवल्दार र एक सशस्त्र जवान पनि साथमै गेटसम्म गएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । प्रहरीको आरोपपत्रमा रोशनी शाहीकी घरबेटीले बयान दिन इन्कार गरेको बताइएको छ । प्रहरीको आरोप पत्रमा त्यस्तै पीडक र पीडित दुवैले मोबाइल सेट दिन इन्कार गरेको समेत उल्लेख छ ।
प्रहरी समक्ष आरोपित महराले रिसको झोकमा आफूले मोबाइल फुटाइदिएको बताएका छन् । यद्यपी आरोपितको हकमा मोबाइल सेट जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले रोशनीको कोठाबाट बरामद गरेको चस्मा र हाल महराले लगाइरहेको चस्माको पावर मिलेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ । आरोपपत्रमा चस्माको पावर प्लस २.७५ भएको डी विस्फोकल रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी महराको डीएनए परीक्षणको लागि अस्पताललाई पत्र पठाए पनि अस्पतालले स्याम्पल नपठाएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।बिहीबार दायर गरिएको मुद्दामा महरालाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसूरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेर महरा ब’ला’त्का’रजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाले त्यसउपर पनि थप कारबाही माग गरिएको छ ।
प्रहरीको सोही प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार उनीविरूद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । मुलुकी अ’प’राध संहितामा जबरजस्ती करणीमा पीडितको उमेर हेरेर सजाय तोक्ने प्रावधान छ। अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी युवती वा महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। ज’बर’ज’स्ती करणी उद्योग गरेको भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ।
महरालाई त्यसको आधा सजाय अर्थात् साढे तीनदेखि ५ वर्षसम्म सजाय मागदाबी गर्न सकिन्छ। महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले डेढ वर्ष थप सजाय हुनसक्ने बताइन्छ । करणी उद्योगमा साढे तीनदेखि साढे पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। कसूर प्रमाणित भए साढे सात वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनविद बताउँछन । सोही अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले यी दुवै कसूर जोडेर पाँचदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।
महरालाई प्रहरीले असोज १९ गते पक्राउ गरेर सिंहदरवारस्थित प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो । केही दिन प्रहरी हिरासतमा बसेपछि अस्वस्थ भएपछि उनको प्रहरीकै निगरानीमा थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बिहीबार आरोपपत्र दर्ता भएको र अब शुक्रबारबाट महराको बयान लिन सुरु गरिने बताइएको छ ।